Usoro kachasị mma dabere na akwụkwọ ị na-agaghị echefu | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
N'afọ ndị na-adịbeghị anya, telivishọn abụrụla ohere dị ike karị nke sitere na ya ịkọ akụkọ, bulite mmefu ego na ịkpọ ndị nnukwu aha. N'ezie, akwụkwọ aghọọla nnukwu egwu maka ụfọdụ ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na-ahụ n'oge na-adịbeghị anya ndị kasị mma ere ákwà ihe kachasị mma iji dọta ọtụtụ ndị debanyere aha ọhụrụ. Echefula ihe ndị a usoro dabere na akwụkwọ ma ọ bụrụ na ị hụbeghị ha ma.
1 Nwanyị Nwaanyị Akụkọ
2 Mepee ọnya
3 Nnukwu ụgha
4 Egwuregwu nke ocheeze
5 Nke asaa
6 Ke ntak 13
Mgbe ọ hụrụ oge mbu nke Akụkọ banyere Nwaanyị Na 2017, anyị niile maara na anyị na-eche nnukwu ihe ihu. Na okpomoku nke #MeToo na Donald Trump, akụkọ nke June, onye nchịkọta akụkọ na-eme nri tụgharịrị ohu ohu DeFred site na steeti Guilead, abụghị naanị ụgbọ ala ntụrụndụ dị mkpa maka mgbede izu ụka, kamakwa na ịdọ aka ná ntị, otu nke na-eme ka anyị mata ihe nwere ike ime n’oge ọ bụla n’ụwa a nọ n’ọgba aghara karịa ka anyị chere. Agbanyeghị, anyị ji ya niile Margaret Atwood, Onye edemede Canada bụ onye nọ na 1985 nọ n'ihu ihe nwere ike ime mgbe o bipụtara akwụkwọ nke na-ekpuchi oge mbụ nke usoro ahụ, nke abụọ wepụtara na telivishọn dị nso dịka ọ na-atọ ụtọ.
Ọ ga-amasị gị ịgụ Nwanyị Nwaanyị Akụkọ?
Ka ahapụchara na mbido July gara aga, ọtụtụ ndị ọkachamara agbaala ọsọ iji gosi ọnya Open dị ka usoro okpomọkụ. Dabere na kacha ere nke Gillian Flynn, onye ode akwukwo nke Lost siri ike, onye a maara dika Sharp Objects na-enye Camille Preaker (nnukwu Amy adams), onye odeakụkọ nwere nsogbu mmanya na-aba n'anya bụ onye ga-alaghachi n'obodo ya, Wind Gap, iji kpuchie ogbugbu nke ụmụ okorobịa abụọ. Ọnọdụ nke na-adịwanye nhịahụ mgbe onye protagonist ga-alaghachi ibi na nne ya siri ike, Adora, na ọkara nwanne nwanyị aha ya bụ Amma onye ọ na-amachaghị.
Lee Mepee ọnya tupu ị na-ekiri usoro ọkọchị.
Otu onye isi nke Open Ogbugbu, Jean-Marc Vallee, kpatara nsogbu na-ebibi afọ gara aga na onye ọzọ usoro ndi nwanyi site na akwukwo, kpọmkwem nke Akwụkwọ Liane Moriarty nke otu aha. Ntọala na mpaghara obibi na Northern California, Nnukwu Lgha ụgha nwere nnukwu ikike ya na ndị isi na-eme ihe nkiri: Nicole Kidman, Reese Whiterspoon, Laura Dern, Shailene Woodley ma ọ bụ Zoë Kravitz, ndị na-ese ihe osise bụ ndị ndị odide ha na-eche ihu na esemokwu dị iche iche kwa ụbọchị n'etiti oge ezumike ụlọ akwụkwọ na kọfị ụtụtụ na-atụle ihe nkiri ha. Onye na-achọ ịlụ nwanyị nke meriri ọha na eze na 2017 na nke oge nke abụọ ga-abịarute HBO na 2019.
Egwuregwu nke ocheeze
Ọ bụ ezie na site ugbu a ọtụtụ n'ime ụwa maara usoro kpakpando nke iri, ọ dịghị mgbe ọ na-afụ ụfụ icheta mbido nke HBO epic nke oge ikpeazụ ya ga-ada na oge opupu ihe ubi nke 2019. Ogologo echere nke ọtụtụ n'ime gị nwere ike belata site na ịgagharị na peeji nke saga.Abụ nke ice na ọkụnke George RR Martin malitere na onye atụmatụ ya, n'agbanyeghị inwe usoro akụkọ dị iche na nke usoro ahụ, bụrụ ụzọ kachasị mma iji cheta ụfọdụ n'ime ihe odide na ọnọdụ ndị meworo Poniente ka ọ bụrụ n'ọgbọ agha telivishọn kachasị ukwuu na United States n'afọ gara aga.
Mgbe ihe ịga nke ọma mbụ ya na 2014, Los 100 nọ na egwu iji kpọsaa oge nke isii nke na-ekwe nkwa idozi ọtụtụ enigmas zụlitere n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Dabere na eponymous site na Kass Morgan, Nke asaa bụ usoro edebere otu narị afọ mgbe emechara mbibi nke ụwa n’ihi agha nuklia. Ọnọdụ nke na-eme ka ndị lanarịrị ọdachi ahụ biri na L'Arche, ụgbọ mmiri na-ejikọ ọtụtụ ndị ọzọ mana na, mgbe mmadụ jubigara ókè na ụba mmadụ, kpebiri iziga ndị omekome 100 n'ụwa ka ha wee chọpụta ma ọ ga-ebi ọzọ. Nsogbu na-abịa mgbe ndị protagonists na-abịa na mbara ụwa ọhụrụ jupụtara na ihe egwu na ihe ịtụnanya.
Ke ntak 13
El mmegbu abụrụla ihe ọzọ na-eme na fim na telivishọn na Ke ntak 13 abụwo onye kasị nwee ihe ịga nke ọma nke mkpesa a. Dabere na akwụkwọ akụkọ Jay Asher bipụtara na 2007, usoro Netflix ghọrọ ihe ịga nke ọma mgbe emechara ya n'afọ gara aga, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-akpọ mbido nke malitere ohere "dị egwu". Akụkọ banyere Hannah Baker, bụ onye nọ n’afọ iri na ụma nke jikọtara ọnọdụ dị iche iche nke mere ka ọ gbaa akaebe banyere igbu onwe ya site na teepu cass 13 juru onye ọ bụla anya ma mepụta oge nke abụọ ewepụtara n’afọ a nke nnabata ya dị ọkụ karịa nke onye bu ya ụzọ.
Dabere na akwụkwọ 1991 nke Diana Gabaldon nke jikọtara ya na akwụkwọ asatọ nke onye edemede dere, Outlander Ọ bụrụla obere nchọpụta maka ndị hụrụ obere ihuenyo na njem oge. Wepụtara na 2014, usoro a na-akọ akụkọ banyere Claire Beauchamp, nọọsụ nke Agha Warwa nke Abụọ onye si na England gaa 1945 gaa Scotland na 1743, ebe ọ hụrụ onye agha Highland Jamie Fraser n'anya n'oge kachasị oge. . A ịmata njem site na akụkọ ihe mere eme nke Europe nke dị n’ụzọ nke anọ ga-abịa n’afọ a.
Sherlock Holmes, onye nyocha a ma ama si Baker Street etinye aka na atụmatụ dị iche iche nke London nke Victorian London bụ agwa nke Arthur Conan Doyle mepụtara bụ onye gaferela narị afọ gara aga dịka akara ngosi nke ọdịnala ndị ama ama n'ụdị ihe nkiri Disney ma ọ bụ nkwụsị nke ndị na-eme ihe nkiri bụ Robert Downey Jr. na Juder Law. Agbanyeghị, nnukwu mkpughe bịara na mmalite nke usoro Sherlock, nke Benedict Cumberbatch dị ka Sherlock na Martin Freeman dị ka Maazị Watson tụgharịrị akụkọ ifo site na ịmegharị ya na teknụzụ narị afọ nke XNUMX, na-atụgharị nzọ nzọ BBC ka ọ bụrụ ihe ịga nke ọma.
Osimiri nke usoro dabere na akwụkwọ amalitela, bụrụ anụ nke ihe telivishọn maka ụdị dị ka Netflix ma ọ bụ HBO nke chọtara ọgazị ọhụrụ ha nke na-etinye akwa ọlaedo na lyrics.
Kedu usoro nke dabeere na akwụkwọ bụ ọkacha mmasị gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Usoro kachasị mma dabere na akwụkwọ